सुन्दै अच्चम हाँस्नु कि रुनु ? गोबर दलेर कोरोना भगाउने कोसिस – Life Nepali
सुन्दै अच्चम हाँस्नु कि रुनु ? गोबर दलेर कोरोना भगाउने कोसिस
हाँस्नु कि रुनु ? गोबर दलेर कोरोना भगाउने कोसिस
भारत यतिबेला कोरोना महामारीको चपेटामा छ । दुई डोज खोप लगाएकाहरु समेत कोरोना संक्रमणबाट ग्रस्त छन, ज्यान गुमाएका छन् ।यस्तो बेला भारतकै गुजरात राज्यको अहमदाबादको एउटा बिद्यालयमा भने गाउँलेहरु भेला भई धमाधम गाईको गोबर र पिसाव दलेर कोरोना भगाउने कोसिसमा छन् । र, उनीहरुको विश्वास छ कि– यो विधिले उनीहरुको कोरोना प्रतिरोधी क्षमता बढ्छ र कुनै पनि हालतमा संक्रमण हुँदैन ।
डाक्टर तथा बिज्ञहरुले पटकपटक यस्ता वैकल्पिक उपचार बिधिले झन खतरा निम्त्याउने भन्दै चेतावनी दिइरहेका छन् । आफ्नो शरिरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता रहेको भ्रममा पर्दा बेलैमा कोरोनाको उपचार हुनबाट बञ्चित हुने भन्दै चिकित्सकहरुले यस्ता कार्यप्रति चिन्ता जनाइरहेका छन्
महामारीको चपेटामा छ । दुई डोज खोप लगाएकाहरु समेत कोरोना संक्रमणबाट ग्रस्त छन, ज्यान गुमाएका छन् ।यस्तो बेला भारतकै गुजरात राज्यको अहमदाबादको एउटा बिद्यालयमा भने गाउँलेहरु भेला भई धमाधम गाईको गोबर र पिसाव दलेर कोरोना भगाउने कोसिसमा छन् । र, उनीहरुको विश्वास छ कि– यो विधिले उनीहरुको कोरोना प्रतिरोधी क्षमता बढ्छ र कुनै पनि हालतमा संक्रमण हुँदैन ।
Previous Breaking News : केपी ओलीकाे राजीनामा सङ्गै, अबको प्रधानमन्त्री यि नेता हुने पक्का !
Next Breaking News : ओलीलाई नै फेरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने शितल निवासको अन्तिम तयारी !